LibreOffice क्याल्कमा प्रोग्रामिङ्गका लागि थप्नुहोस्
Add-Insद्वारा क्याल्क फैलाउने विधि यो तल दिएको अद्यावधिकमा वर्णन गरिन्छ । अवस्थित रहेको Add-Ins सहित अनुकूलता निश्चित गर्नलाई यि इन्टरफेसहरू पहिले देखिनै वैध र समर्थित हुन्छन् । तर प्रोग्रामिङ नयाँ Add-Ins का लागि तपाईँंले नयाँ API प्रकार्यहरू प्रयोग गर्नै पर्दछ ।
प्रत्येक Add-In लाइब्रेरीले पृथक प्रकार्यहरू उपलब्ध गराउँदछन् । केही प्रकार्यहरू प्रशासनिक उद्देश्यहरूका लागि प्रयोग हुन्छन् । तपाईँं लगभग कुनैनाम तपाईँं आफ्नै प्रकार्यका लागि रोज्न सक्नुहुन्छ । यद्यपि, तिनीहरूले परामिति पास गर्दा पनि निश्चित नियम ख्याल गरेर पालना गर्न जरुरी छ । फरक प्लेटफर्महरूका लागि निश्चित नाम राख्ने र बोलाउने प्रथाहरू फरक हुन्छन।
न्यूनतममा, प्रशासनिक प्रकार्यहरू GetFunctionCount and GetFunctionDataनिकाल्नु पर्दछ । तिनीहरूलाई प्रयोग गर्दा, परामिति प्रकार जत्तिकै प्रकार्यहरू र निर्धारण गर्न सकिने मानहरू फर्काउँदछ । फर्कने मानहरूको रूपमा, डबल र स्ट्रिङ प्रकारहरूले समर्थन गर्दछन । परामितिहरूको रूपमा, अतिरिक्त कक्ष क्षेत्रहरूडबल एरे, स्ट्रिङ एरे, र कक्ष एरे समर्थन गर्दछन् ।
सन्दर्भहरू प्रयोग हुँदा परामितिहरूले पासगर्दछन् । त्यसकारण,ती मानहरूको परिवर्तन गर्न सामान्यत: सम्भव हुन्छ । यद्यपी,यसले LibreOffice क्याल्क समर्थन गर्दैन किन भने यसले स्प्रेडसिटहरू भित्र अर्थ युक्त काम गर्दैन ।
रनटाइमको बेला लाइब्रेरीहरू पुन: लोड हुन सक्दछन र ती सामग्रीहरू प्रशासनिक प्रकार्यहरूद्वारा विश्लेषण गर्न सकिन्छ । प्रत्येक प्रकार्यका लागि, परामितिहरू गणना र प्रकारको बारेमा सूचनाहरू उपब्ध हुन्छ ।
प्रकार्यहरू तत्कालै बोलाउँदछ र तिनीहरूको परिणाम तुरुन्तै प्रतिफल गर्दछ । वास्तविक समय प्रकार्यहरू(तत्कालिन प्रकार्यहरू) पनि सम्भव हुन्छन्; यद्यपी,तिनीहरू तिनीहरूकै जटिलता कारणले गर्दा विस्तारमा व्याख्या गरिएका हुँदैनन् .
इन्टरफेसको बारेमा सामान्य जानकारीहरू
Add-In प्रकार्यमा अधिकतम परामितिहरूको सङ्ख्या LibreOffice क्याल्क १६मा समाहित गरेको हुन्छ: एउटा फर्कने मान र अधिकतम १५ प्रकार्यहरूको आगत परामितिहरू ।
डेटा प्रकारहरू तल परिभाषित गरिन्छ:
तल्ला सञ्झ्यालहरू: FAR PASCAL (_far _pascal)
अन्य:पूर्वनिर्धारित (सञ्चालन प्रणाली निर्दिष्ट पूर्वनिर्धारित)
२ बाइट साइन नगरिएका इन्टिजर
८ बाइट प्लेटफर्म-आधारित ढाँचा
int जस्तै प्लेटफर्म-आधारित
PTR_DOUBLE =० डबलमा देखाउने
PTR_STRING = १ शून्य-समाप्त स्ट्रिङमा देखाउने ।
PTR_DOUBLE_ARR =२ डबल एरेमा देखाउने
PTR_STRING_ARR =३ स्ट्रिङ एरेमा देखाउने
PTR_CELL_ARR =४ कक्ष एरेमा देखाउने
सन्दर्भ परामितिको व्यवस्थापन प्रकार्यहरू बाहेक प्रकार्यको सङ्ख्या फर्काउँदछ । प्रत्येक प्रकार्यसँग एउटा अनुपम सङ्ख्या ० र nCount-१ बीचमा हुन्छ । यो सङ्ख्या GetFunctionData र GetParameterDescription प्रकार्य अक्षरका लागि आवश्यक पर्नेछ ।
Add-In प्रकार्य बारेमा सबै महत्व पूर्ण सूचनाहरू निर्धारण गर्दछ ।
pFuncName र pInternalName परामितिहरू char एरेहरू हुन् । जुन चाहिँ साइज २५६ सहित LibreOffice क्याल्कमा लागू गरिन्छ ।
Add-In प्रकार्य र यसका परामितिहरूको वृतान्त वर्णन उपलब्ध गराउँदछ. एउटा विकल्पको रूपमा, यो प्रकार्य प्रकार्य देखाउन र प्रकार्य विजार्ड.मा परामिति वर्णन गर्न प्रयोग गर्न सकिन्छ ।.
pName र pDesc char एरेहरू हुन्; LibreOffice क्याल्क मा साइज २५६ सहित लागू हुन्छन् । कृपया प्रकार्य विजार्डमा उपलब्ध खाली स्थान द्रष्टव्य गर्नुहोस् यो सीमित छ र यसमा २५६ क्यारेक्टरहरू पूरा प्रयोग गर्न सकिँदैन ।
तल दिएका तालिकाहरू जसमा डेटा बनावटहरू कक्ष क्षेत्रमा पास गरेको अनुसार बाहिरी कार्याक्रम मोड्युलद्वारा उपलब्ध गराउन जरुरी पर्ने बारेका सूचनाहरू समावेश गर्दछ । LibreOffice क्याल्क ले तीन फरक प्रकारका एरेहरूको बीचको भिन्नता निकाल्दछ ।
परामितिको रूपमा, सङ्ख्या/डबल प्रकारको मानहरू सहित कक्ष क्षेत्र पास गरिन्छ । LibreOffice क्याल्क मा डबल एरे तल परिभाषित गरिन्छ:
कक्ष क्षेत्रको माथि-बायाँ कुनामा स्तम्भ सङ्ख्या । क्रमाङ्कन ० बाट सुरु हुन्छ ।
कक्ष क्षेत्रको माथि-बायाँ कुनोमा पङ्क्ति सङ्ख्या; क्रमाङ्कन ० बाट सुरु हुन्छ ।
कक्ष क्षेत्रको माथि-बायाँ कुनामा तालिका सङ्ख्या; क्रमाङ्कन ० बाट सुरु हुन्छ ।
कक्ष क्षेत्रको तल-दायाँ कुनामा स्तम्भ सङ्ख्या । क्रमाङ्कन ० बाट सुरु हुन्छ ।
कक्ष क्षेत्रको तल-दायाँ कुनामा पङ्क्ति सङ्ख्या; क्रमाङ्कन ० बाट सुरु हुन्छ ।
कक्ष क्षेत्रको तल-दायाँ कुनामा तालिका सङ्ख्या; क्रमाङ्कन ० बाट सुरु हुन्छ ।
निम्न तत्वहरूको सङ्ख्या । खाली कक्षहरू गणना गरिएको छैन वा पास गरिएको छैन ।
तत्वको स्तम्भ सङ्ख्या । क्रमाङ्कन ० बाट सुरु हुन्छ ।
तत्वको पङ्क्ति सङ्ख्या; क्रमाङ्कन ० बाट सुरु हुन्छ ।
तत्वको तालिका सङ्ख्या; क्रमाङ्कन ० बाट सुरु हुन्छ ।
त्रुटि सङ्ख्या, जहाँ मान ० "no error." को रुपमा परिभाषित गरिएको छ । यदि तत्व सूत्र कक्षबाट आएको छ भने त्रुटि मान सूत्र द्वारा निर्धारण गरिएको छ ।
डबल/उत्प्लवन बिन्दु प्रकारको ८बाइत IEEE चल
कक्ष क्षेत्र, जसमा डेटा प्रकार पाठको मानहरू समावेश हुन्छ र स्ट्रिङ एरेको रूपमा पास गर्दछ । LibreOffice क्याल्कमा स्ट्रिङ एरे तल परिभाषित गरिन्छ:
दिएको स्ट्रिङ लम्बाइ, समावेश बन्द शून्य बाइट । यदि लम्बाइ समावेश शून्य बाइट बराबर दोस्रो शून्य बाइटको बिजोर मान स्ट्रिङमा जोडिएमा त्यसले जोर मान लिन्छ । त्यसकारण Len ((StrLen+2)&~1) को प्रयोग गरेर गणना गरिन्छ ।
बन्द शून्य बाइट सहित स्ट्रिङ
कक्ष एरेहरू बोलाउने कक्ष एरेहरू समावेश पाठ को साथ साथै सङ्ख्याहरूमा प्रयोग हुन्छ । कक्ष एरे LibreOffice क्याल्कमा तल परिभाषित गरिएको छ:
कक्ष सामग्रीको प्रकार, ० == डबल, १ == स्ट्रिङ
मान वा Len
यदि प्रकार == ०: ८ बाइट IEEEडबल/उत्प्लवन बिन्दु प्रकारको चल
यदि प्रकार == १: दिएका स्ट्रिङहरूको लम्बाइ, बन्द शून्य बाइट समावेश । यदि बन्द शून्य बाइट समावेश लम्बाइ बराबर दोस्रो शून्य बिजोर मान स्ट्रिङमा थपिएको खण्डमा तिनीहरूले जोर मान ग्रहण गर्दछन् । त्यसकारण,Len ((StrLen+2)&~1) को प्रयोग गरेर गणना गरिन्छ ।
२६ यदि प्रकार==1
यदि प्रकार == १: बन्द शून्य बाइट सहितको स्ट्रिङ
३२ वा २६+Len
Title is: $[officename] क्याल्कमा प्रोग्रामिङ्गका लागि थप्नुहोस्